သုံးသပ်ချက် - ဗာဂျီးနီးယားသိုးမွှေးကိုဘယ်သူကြောက်နေတာလဲ။ - ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ် - သတင်း
သုံးသပ်ချက် - ဗာဂျီးနီးယားသိုးမွှေးကိုဘယ်သူကြောက်နေတာလဲ။
Corpus Playroom အတွင်း၌အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှပြင်းထန်မှုမှာလည်းမြင့်တက်လာခဲ့သည် အဘယ်သူသည်ဗာဂျီးနီးယား Woolf ကြောက်လန့်? : နောက်ဆုံးမြင်ကွင်းများအားဖြင့်, နှစ် ဦး စလုံး frenetic မြင့်တက်ခဲ့သည်။ Corpus ကစားကွင်း၏ရင်းနှီးမှုသည်စံပြအနေအထားကိုပြသခဲ့ပြီးပြဇာတ်၏ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဝန်းကျင်ကိုအလေးပေးပြီးပရိသတ်ကိုတကယ့်ကိုတုန်လှုပ်စေသောအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ နယူးအင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်၏ကျောင်းဝင်းရှိ sitting ည့်ခန်းတစ်ခုတည်းတွင်သာပြုလုပ်နိုင်သည်။ တက္ကသိုလ်ဥက္ကpresident္ဌ၏သမီးဖြစ်သူ Martha (Shimali De Silva) နှင့်သူမ၏ယုံကြည်သူခင်ပွန်းဂျော့ခ်ျ (Joe Tyler Todd) တို့သည်ပါတီတစ်ခုမှမနက် ၂ နာရီတွင်အိမ်ပြန်ရောက်သည်။ နှုတ်အားဖြည့်စကားသည်ချက်ချင်းစတင်ခဲ့ပြီးဇီဝဗေဒပါမောက္ခသစ်နစ်ခ် (မီလို Callaghan) နှင့်သူ၏ရိုးရာဇနီးဖြစ်သူဟန်းနီ (Annabelle Haworth) တို့နှင့်အတူပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။
လေးသင်းကအတူတကွကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးရှုပ်ထွေးသောဆက်နွယ်မှုနှင့်အင်အားကြီးမားသောဒိုင်းနမစ်များကိုယက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏အမေရိကန်အသံထွက်များသည်လုံး ၀ ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်။ အထူးသဖြင့်မာတင်အဖြစ် Shimali De Silva ကိုပြောပြသင့်သည်။ သူမခင်ပွန်းနှင့်ပရိသတ်တစ်ခုလုံး၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအစကန ဦး ကတည်းကစိတ်ချရပြီးသြဇာသက်ရောက်သောမာသဖြစ်သည်။ တစ်လျှောက်လုံး Martha ၏အစွမ်းခွန်အားသည်နောက်ဆုံးမြင်ကွင်းတွင်သူမအားနည်းချက်ကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးသူမ၏နောက်ဆုံးဖှယျဝန်ခံချက်ကိုဖြန့်ချိလိုက်ခြင်းဖြင့်အဖြူရောင်အလင်းတိုးပွားမှုသည်ဒီဇိုင်းပညာရှင် Eduardo Strike ကကောင်းစွာအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
လုပ်ရပ်သုံးခုစလုံးကိုနှစ်မိနစ်ခြားနားရန်ခေတ္တနားရန်ခေတ္တရပ်နားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပရိသတ်အတွက်မဆုတ်မနစ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်ရှုပ်သူများအားစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမှကာကွယ်ရန်စီးဆင်းရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါသွန်းယာယီတင်းမာမှုဖျောက်ရန်ပြဇာတ်ရဲ့ဟာသကောင်းသောအသုံးပြုမှုကိုလုပ်။ , အထူးသဖြင့်ပျားရည်ရုပ်ပြကယ်ဆယ်ရေး၏ကြိုဆိုအချိန်လေးပေး။ ဒီပြဇာတ်မှာအဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးသရုပ်ဆောင်လေးယောက်ကဒီအရာတွေကိုရှောင်ရှားခြင်းမပြုဘဲယုံကြည်စိတ်ချရသောရယ်မောခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုအာရုံစိုက်စေခဲ့သည်။
Stanley Thomas မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည့်အပြင်သရုပ်ဆောင်များသည်ဆိုဖာနှင့်အချုပ်အခြာသေတ္တာအကြားသဘာ ၀ အတိုင်းအတာနှင့်သဘာ ၀ အတိုင်းအတာကိုရွေ့လျားစေပြီးအဆုံးမဲ့ဘရန်ဒီနှင့် bourbons များကိုစားသုံးခဲ့သည်။ သရုပ်ဆောင်များသည်မအောင်မြင်သောအမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်များအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအလွန်အမင်းချဲ့ကားပြောဆိုမှုများသည်အလွန်နည်းသည်။
အဘယ်သူသည်ဗာဂျီးနီးယား Woolf ကြောက်လန့်? သင့်တော်လျောက်ပတ်သောကြောက်ရွံ့မှုကင်းမဲ့သောထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည်။ ပရိသတ်ကိုစိန်ခေါ်ပြီးတုန်လှုပ်စေသည်၊ ဖော်ထုတ်ခံရသည့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၏အနက်ရှိုင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုစောင့်ကြည့်ရန်သူတို့ကိုတွန်းအားပေးသည်။ ပြဇာတ်သည်စကားလုံးများနှင့်သူတို့၏စွမ်းအားကိုလှည့်ဖြားရန်ဆွဲဆောင်ခြင်း၊ လှည့်စားခြင်း၊ ဒီထုတ်လုပ်မှု Albee ရဲ့စကားဟာသူတို့ရဲ့အပြည့်အဝအလားအလာမှပဲ့တင်ထပ်နေရန်ခွင့်ပြုတဲ့ကုန်ကြမ်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါသငျသညျသှားဖို့အပူသတ္တိနှင့်၎င်း၏ပြင်းထန်သော, မပြောင်းလဲသောဘုန်းအသရေ၌ဤထူးခြားသောထုတ်လုပ်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သင့်အားအားပေးချင်ပါတယ်။
၄.၅ / ၅ ကြယ်
ဗာဂျီးနီးယားသိုးမွှေးကိုဘယ်သူကြောက်နေတာလဲ Corpus Playroom တွင်မေလ ၁၂ ရက်မတိုင်မီဖွင့်သည်